‘गलत मान्यताविरुद्ध डटेरै सामना गर्ने हो’
‘गलत मान्यताविरुद्ध डटेरै सामना गर्ने हो’ ‘माफी माग्न त गल्ती गरेको हुनुपर्‍याे नि !’
राधिका अधिकारी आइतबार, साउन १८, २०७७
गायिका सोफिया थापाले केही समयअघि ‘यसपालिको तीज, नो व्रत प्लिज’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिन् । थापाकै शब्दसंगीत रहेको उक्त गीत निकै विवादित भयाे । खासगरी हिन्दू धर्मसँग सम्बिन्धित विभिन्न संघसंस्थाले गीतमा प्रयोग भएको शब्दप्रति आपत्ति जनाए । कतिपयले भौतिक कारबाहीको धम्की दिए । कसै कसैले गीत ‘प्रगतिशील’भन्दै प्रशंसा पनि गरे । तर, विवाद बढेसँगै उक्त गीत युट्युबबाटै हटाइयो । यसबारे उक्त गीतकी रचनाकार, संगीतकार एवम् गायिका थापासँग नेपाली पब्लिकका लागि राधिका अधिकारीले गरेको कुराकानी :
तपाईंको पछिल्लो गीत निकै विवादित भयाे । अन्नतः युट्युबाटै हटाइयो, किन होला ?
गीत लेख्नु, संगीत भर्नु र गाउनु मेरो रहर हो । तर, अब हामीले गाउने गीतले समाज परिवर्तनमा केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले तीज छेकाे पारेर ‘नो व्रत प्लिज’भन्ने गीत तयार गरी सार्वजनिक गरें । हाम्रो परम्परा पुरातनवादी, असमान र महिलालाई विभेद गर्ने प्रकारको छ । बिरामी भए पनि पुरुषको हितका लागि जबर्जस्त व्रत बस्नुपर्ने धार्मिक–सामाजिक नियम छ ।
दिनभर भोकै बसेर राति पुरुषको खुट्टाको पानी खानुपर्ने परम्परा छ, जुन गलत छ । यही विभेदकारी नियम तोड्न नारीलाई अभिप्रेरित गर्ने गरी उक्त गीत निकालेको हुँ । धर्मका नाममा विभेद गरेर आफूलाई माथि ठान्ने केही संस्था र मान्छेलाई त्यो कुरा नपच्नु स्वाभाविक हो । धेरैले राम्रो गीत ल्याएको भन्दै बधाई दिइरहेकै थिए । तर, एक्कासि युट्युबबाटै गीत हटाउनुपर्ने परिस्थिति कसरी निर्माण भयो, पत्तो पाउन सकेकी छैन ।
तपाईंलाई केही संस्था र व्यक्तिले भौतिक कारबाहीसम्म गर्ने धम्की दिएको न्युज आएको छ । खासमा के हो ?
सही हो । गीत हटाउन निकै दबाब आयो । कतिले भौतिक कारबाहीको धम्की पनि दिए । मलाई मात्रै होइन, गीत अपलोड गर्ने हाइलाइट्स नेपालका सञ्चालकलाई पनि धम्की दिए । हाइलाइट्सले दबाब थेग्न नसकेर गीत हटायो । यो दुःखद सत्य हो ।
किन धार्मिक संवेदनशीलता नबुझी गीत निकाल्नुभएको त ?
म धर्म–संस्कृति नबुझेको मान्छे होइन । मान्छेको आस्था/विश्वासमा चोट पुर्‍याउन हुन्न भन्ने लाग्छ । धार्मिक–सामाजिक संदेवनशीलता नबुझेर उक्त गीत ल्याएको होइन । गीतमा पनि मैले 'धर्म त्यागौं' भनेको छैन । तर, धर्मका नाममा भएका केही गलत परम्परा परिमार्जन गर्नैपर्छ, छाड्नैपर्छ । दिनभर व्रत बसेर साँझ श्रीमानको खुट्टा धोएको पानी खाने परम्परा गलतभन्दा म कसरी धर्मविरोधी हुन्छु ? कसरी असंवेदनशील हुन्छु ?
बिरामी भए पनि पुरुषको हितका लागि जबर्जस्त व्रत बस्नुपर्ने धार्मिक–सामाजिक नियम छ । दिनभर भोकै बसेर राति पुरुषको खुट्टाको पानी खानुपर्ने परम्परा छ, जुन गलत छ । यही विभेदकारी नियम तोड्न नारीलाई अभिप्रेरित गर्ने गरी उक्त गीत निकालेको हुँ ।
गीतकै कारण भइरहेको विवाद, टिप्पणी र धम्कीलाई कसरी सामना गरिरहनुभएको छ ?
सुरुमा त अलिअलि डर पनि लागेको थियो । तर, म ढुक्क थिएँ कि, मैले ल्याएको गीत गलत छैन । क्रमशः शुभचिन्तक र सामाजिक रुपान्तरण चाहनेहरुले मलाई समर्थन गर्न थाल्नुभयो । त्यसपछि झन् बलियो महसुस गरेकी छु । ‘म कलाकार हुँ, एक्लो छैन’ भन्ने लाग्यो । म कमजोर नारी पनि होइन । उक्त गीत पनि मैले आवेश र उत्तेजनामा लेखेको थिइनँ । धेरै सोचविचार गरेर लेखेको हो । म अहिले माफी माग्ने पक्षमा छैन । गलत मानसिकतासँग डटेर सामना गर्छु, गरिरहेकै छु ।
गीत विवादित भएपछि चर्चित पनि हुनुभयो । राम्रै भयो है !
गीतसंगीत मेरो रहरको विषय हो । भाइरल हुन गीत लेखेकी, गाएकी होइन । गीतसंगीत मनोरञ्जन मात्रै होइन भन्ने चेतनाबाट पनि प्रेरित छु । पेसाले शिक्षक हुँ । समाजमा केही न केही दिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । चर्चित हुनुसँग मेरो लोभ छैन । १५ वर्षदेखि संगीतको क्षेत्रमा केही न केही गरिरहेकै छु । अब पनि गर्छु ।
फोटो : गायिका सोफिया थापाको फेसबुकबाट
तीज गीतमा विकृति बढ्यो भन्ने आरोप पनि छ, हो ?
सदियौंदेखि महिलालाई विभेद गरिएको छ । अनि तीजमा नारीले विभेद र दुःख पीडा पोख्न थाले । अब चाहिँ त्यो विभेद वा दुःखको कारण खोज्नु पर्छ र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । जुनकुरा तीज गीतमा पनि आउन थालेको छ । नारी स्वच्छन्द भएको कुरालाई स्वीकार्न पुरुषसत्तावादी समाजलाई गाह्रै हुन्छ । नारीको उन्मुक्त आवाजलाई विकृति भन्नेहरु पनि छन् । अनि, कोहीकोहीले रुपान्तरण भन्दा पनि समाजलाई झन् पछाडि धकेल्ने गरी गीत निकालेका छन् । त्यो चाहिँ ठिक होइन । कुनलाई विकृतिमान्ने, कुनलाई नमान्ने मान्ने हाम्रो मानक नै खराब छ ।
तीज गीतमा जागरण र प्रेरणाका कुरा कम भएको त हो नि, होइन र ?
हो । तीजका गीतमा महिलाहरुले बेदना मात्रै गाए । बेदना पोखेर जागरण कसरी आउँछ ? महिलाले बेदना मात्रै गाउनु पर्छ भन्ने नि छैन ।
समाज परिवर्तनमा गीत संगीतको भूमिका कस्तो हुन्छ?
धेरै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हिजो रामेशहरुले ‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ’ भन्ने गीत गाएर जुन तरंग ल्याए, त्यो अरुमाध्यमबाट सम्भव थिएन । समाज परिवर्तन, रुपान्तरण र जागरणका लागि मात्रै होइन, व्यवस्था ढाल्न पनि गीतसंगीतको भूमिका प्रधान भएको स्पष्ट छ ।
परिवर्तनका पक्षमा गीत गाएकै कारण धेरै कलाकारले राज्यसत्ताको यातना खप्नु परेको छ । राज्यले परिवर्तनको अवाजलाई दबाउन खोज्छ । त्यस विरुद्ध कलाकारले निडर भएर आवाज बुलन्द गरेका छन् । गरिरहेका छौं । मेरो पछिल्लो गीत पनि त्यसकै एउटा उदाहरण हो ।
नारी स्वच्छन्द भएको कुरालाई स्वीकार्न पुरुषसत्तावादी समाजलाई गाह्रै हुन्छ । नारीको उन्मुक्त आवाजलाई विकृति भन्नेहरु पनि छन् । अनि, कोहीकोहीले रुपान्तरण भन्दा पनि समाजलाई झन् पछाडि धकेल्ने गरी गीत निकालेका छन् । त्यो चाहिँ ठिक होइन ।
तीज गीत कस्ताे हुनुपर्छ ?
अब ‘लोकभाखा मात्रै तीज गीत हो’ भन्ने सोच हटाउनु पर्छ । समयअनुसार मूल्यमान्यता पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यहीं अनुसार गीतसंगीतलाई बदल्दै जानु पर्छ । अनि गीत प्रायः परिवर्तनका पक्षमा हुनुपर्छ । पुरातन रुढीवादी सोच, परम्परा, सँस्कार र मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन गीतसंगीतलाई सारथि बनाउनुपर्छ । जुन अपेक्षनकृत भइरहेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १८, २०७७ २१:५०